NGOKUTSHO kweSebe Lezempilo Neenkonzo Zoluntu eUnited States, “ukususela ngowe-1980 ukusa kowama-2002, liye landa ngokuphindwe kathathu inani labantwana abakwishumi elivisayo abatyebe gqitha, ibe le ngxaki iliphinda kabini eli nani kubantwana abancinane.” Oku kutyeba ngokugqithiseleyo kwasebutsheni kwabantu kwayanyaniswa nezigulo eziqhubekayo ezifana nehigh blood, isifo seswekile, isifo sentliziyo, nezinye iintlobo zomhlaza. *
Ziliqela izinto ekuthiwa zibangela ukutyeba ngokugqithiseleyo kwasebutsheni, ziquka ukusoloko uhleli ungenzi nto, iintengiso ezenzelwa ukutsala abaselula, ukufumaneka lula nokuba nemali yokuthenga ukutya okungekho mpilweni. IZiko Lokuthintelwa Kwezifo eUnited States lithi: “Ukutyeba ngokugqithiseleyo kwasebutsheni kubangelwa kukuzingxala ngokutya okunika umzimba amandla amaninzi kube kungekho nto uyenzayo ukuwasebenzisa, efana nokuzilolonga.”
Ngenxa yoku, abantwana nabo bakwishumi elivisayo nabantu abadala bamele bayijonge indlela abatya ngayo. Singadanga sizibaxe izinto, kukho izinto ezimbalwa ezilula ezinokusinceda. Ngokomzekelo, kukho umfana ogama linguMark, owafumanisa ukuba ukwenza uhlengehlengiso kwindlela atya ngayo kwamnceda gqitha wasempilweni. Uthi: “Kukho ixesha apho ndandilikhoboka lokutya okungekho mpilweni kwaphela.” UVukani! ukhe wadlan’ indlebe noMark ukuze eve indlela alwenze ngayo olo tshintsho.
Yaqala nini le ngxaki yakho?
Emva kokugqiba isikolo. Lelo xesha kanye endaqalisa ngalo ukuya kutya ezivenkileni. Kufuphi nasemsebenzini kwakukho iivenkile ezimbini zokutya, ngoko ndandisitya kuzo emini phantse yonke imihla. Kwakulula ukuya kutya kuzo kunokuziphekela.
Yaba njani imeko emva kokuba uphume waya kuzihlalela?
Waba nochatha lo mkhwa. Ndandingakwazi ukupheka, ndabe ndingenamali yaneleyo; yabe nevenkile enoku kutya kungekho mpilweni ndikuthandayo ikufuphi. Eyona ndlela ilula nefikelelekayo yaba kukuya kutya apho. Ukongezelela koko kutya kungekho mpilweni, ndandisitya kakhulu. Ndandingakuthandi ukutya nje okuqhelekileyo. Ndandizibetha ngeetshiphsi ezinkulu, umngxu wesihlwahlwazayo nomagumede wehamburger—ndithenga nantoni na enkulu xa ndinemali yayo.
Zajika phi izinto?
Xa ndandineminyaka engaphezu kwama-20, ndaqalisa ukucingisisa ngempilo yam. Ndandiyimbukumbuku. Ndandihlala ndidiniwe, ndingazithandi kwaphela. Ndaqonda ukuba ndimele ndenze into.
Wenza njani ukuze utye kakuhle?
Ndacinga ngento eza kundinceda kangangexesha elide. Ndaqala ngokunciphisa ukutya kwam. Ndandiye ndizixelele ukuba, “Liza kuphinda lifike elinye ixesha lokutya; andiphelelanga koku.” Maxa wambi kwakufuneka ndimke, ndishiye ukutya apho etafileni. Ndandiye ndivuye xa ndikwenzile oko, kanye oku komntu owoyisileyo.
Ngaba zikho iinguqu ezinkulu ekwafuneka uzenze?
Zikho izinto ekwafuneka ndiziyeke ngokupheleleyo. Umzekelo, ndaziyeka iziselo ezihlwahlwazayo, ndasela amanzi kuphela. Kwakunzima nyhani oko. Ndandizithanda ezi ziselo, ndiwacaphukela amanzi. Emva kokusela amanzi, ndandirhabula ijusi, ukuze umlomo wam ube mnandi. Ethubeni ade aqheleka amanzi.
Yintoni enye owayenzayo ngaphandle kokuyeka oku kutya?
Ndakhetha ukutya ezinye izinto ezifanelekileyo. Ndaqalisa ukutya iziqhamo—iiapile, iibanana, neentlobo ezahlukeneyo zamaqunube, kunye nevatala. Ndaqalisa nokutya inyama engatyebanga njengenkuku okanye intlanzi. Oko kutya kwagqibela sele ikuko okuphambili. Ndizama ukutya imifuno ngakumbi kunokukunye ukutya. Ndiye ndafumanisa ukuba andifane nditye gqitha xa ndikhe ndafumana intwana yokutya okusempilweni ngaphambi kokuya kutya. Ethubeni, ndayeka ukurhalela ukutya okungekho sempilweni.
Ngaba wayeka ngokupheleleyo ukutya ezivenkileni?
Ndisaya ngamaxesha athile. Kodwa ngoku ndiyayilumkela into endiyityayo. Ukuba bandiphakele kakhulu, ndiye ndicele into yokuphatha ukutya endiza kugoduka nako. Emva koko ndikwahlula phakathi ngaphambi kokuba ndiqalise ukutya. Oko kundinceda nditye ukutya okwaneleyo kunokuba ndigqithise, kuba nje ndisoyika ukukushiya epleyitini.
Lukuncede njani lonke olu tshintsho?
Umzimba uye wehla, ndatsho ndafumana namandla. Nditsho ndazithanda noko ngoku. Eyona nto ibalulekileyo nendivuyisayo kukwazi ukuba xa ndinyamekela impilo yam, ndihlonela uThixo ondiphe ubomi. (INdumiso 36:9) Ndandikade ndicinga ukuba ukunyamekela impilo kuyindinisa. Le yindlela endandiya kuyikhetha kwasekuqaleni, ukuba ndandazile! *
^ isiqe. 2 Ibinzana elithi “ukutyeba ngokugqithiseleyo kwasebutsheni” libhekisela kwimeko yempilo echaphazela abantwana abancinane nabo bakwishumi elivisayo. Iingcali zithi afikelela kwiipesente ezingama-70 amathuba okuba abaselula abatyebe gqitha babenjalo naxa sele bekhululile.
^ isiqe. 20 UVukani! akakhuthazi hlobo luthile lwendlela yokutya. Mntu ngamnye umele ahlolisise indlela ayikhethayo aze adibane nogqirha ngaphambi kokuba azenzele isigqibo ngokutya akukhethayo. Musa ukutya kuba nje kuthandwa ngabantu abaninzi kodwa kuyingozi.
Impilo Ngokwasemzimbeni Nasengqondweni Uxolo Nolonwabo